အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေး သူငယ်ရေးရာ ဒုတိယ၀န်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံလိုက်ရတဲ့ မအိသဉ္ဇာမောင် အ‌ေကြာင်း – GaMone Media
Homepage / Knowledge / အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေး သူငယ်ရေးရာ ဒုတိယ၀န်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံလိုက်ရတဲ့ မအိသဉ္ဇာမောင် အ‌ေကြာင်း
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့မှာ မအိသဉ္ဇာမောင်ကို အမျိုးသမီး၊လူငယ်နှင့် ကလေ းသူငယ်ရေးရာ ဒုတိယ၀န်ကြီးအဖြစ် ဧပြီလ(၁၆)ရက်နေ့မှာ ခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် …. Congratulations ပါ ညီမလေး အိသဉ္ဇာမောင်(ဒုတိယဝန်ကြီး)(အမျိုးသမီး၊လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန)ကိုယ်တွေထက် အသက် အရမ်းငယ်ပေမဲ့တော်တော်လေးစားရတဲ့ ညီမလေး
သိက္ခာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား ….သူ့နာမည် အိသဉ္ဇာမောင် အသက်က၂၆ နှစ် လူ့ဘောင်သစ် ပါတီက 2020 ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပန်းပဲတန်း ကနေ ဝင် ပြိုင်ခဲ့တယ်။ NLD က စည်သူမောင် ကို မဲအပြတ်အသတ် နဲ့ ရှုံးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခု လေးစားစရာ ကောင်းတာက6 ရက်နေ့ ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒပြ ပွဲကို သူ ဦးဆောင်ပြီး လူထုကို ရအောင်စည်းရုံးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာမဲက သူရှုံးထားတာနော်။
သူ့ပါတီက လူကြီးလည်းအဖမ်းခံထားရတာ မဟုတ်ဘူး။သို့သော် နိုင်ငံရေး မှာ ညစ်ပတ် လို့ ရတယ် ။ မယုတ်မာနဲ့ ဆိုသကဲ့သို့သူ့အသက်အ ရွယ်နဲ့ ပါတီရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး သူခွဲခြားပြီး လုပ်ဆောင်သွားတယ်။တကယ်ပဲလေးစားပါတယ်။ သိက္ခာရှိသော နိုင်ငံရေးသမားထောင်ကျနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပေမယ့်ူထွက်လာတာ။အခုတော့ သူနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့တာဝန်ကို ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူ ပါတယ်ညီမရေ။
အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရအဖြဲ႕မွာ မအိသၪၨာေမာင္ကို အမ်ိဳးသမီး၊လူငယ္ႏွင့္ ကေလ းသူငယ္ေရးရာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဧၿပီလ(၁၆)ရက္ေန႔မွာ ခန႔္အပ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္ …. Congratulations ပါ ညီမေလး အိသၪၨာေမာင္(ဒုတိယဝန္ႀကီး)(အမ်ိဳးသမီး၊လူငယ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန)ကိုယ္ေတြထက္ အသက္ အရမ္းငယ္ေပမဲ့ေတာ္ေတာ္ေလးစားရတဲ့ ညီမေလး
သိကၡာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမား ….သူ႔နာမည္ အိသၪၨာေမာင္ အသက္က၂၆ ႏွစ္ လူ႔ေဘာင္သစ္ ပါတီက 2020 ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပန္းပဲတန္း ကေန ဝင္ ၿပိဳင္ခဲ့တယ္။ NLD က စည္သူေမာင္ ကို မဲအျပတ္အသတ္ နဲ႔ ရႈံးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခု ေလးစားစရာ ေကာင္းတာက6 ရက္ေန႔ ရန္ကုန္မွာ ဆႏၵျပ ပြဲကို သူ ဦးေဆာင္ၿပီး လူထုကို ရေအာင္စည္း႐ုံးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာမဲက သူရႈံးထားတာေနာ္။
သူ႔ပါတီက လူႀကီးလည္းအဖမ္းခံထားရတာ မဟုတ္ဘူး။သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး မွာ ညစ္ပတ္ လို႔ ရတယ္ ။ မယုတ္မာနဲ႔ ဆိုသကဲ့သို႔သူ႔အသက္အ ႐ြယ္နဲ႔ ပါတီေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး သူခြဲျခားၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားတယ္။တကယ္ပဲေလးစားပါတယ္။ သိကၡာရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားေထာင္က်ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိေပမယ့္ူထြက္လာတာ။အခုေတာ့ သူနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့တာဝန္ကို ရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူ ပါတယ္ညီမေရ။
Previous post အခြေအနေ အရ အကောင့် D ထားရသော် လည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက် ကနေ ပြည်သူ တွေ နဲ့ အတူ ရပ်တည်ပေးနေ တဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
Next post သင်္ကြန်လေးရက် လုံးလုံး သံဃာတော်တွေ ကို ဆွမ်းကပ် လှူကာ မွန်မွန် မြတ်မြတ် ကုသိုလ် ယူ ခဲ့တဲ့ ဟိန်းဝေယံ